के हो सिलिएक डिजिज ? - Naya Patrika
के हो सिलिएक डिजिज ?
यदि तपाईंका छोराछोरीमा प्रायः पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, पातलो दिसा हुने, रुघा लाग्ने, रगतको कमी हुने, शरीरको वृद्धि रोकिनेजस्ता समस्या देखिएको छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । यो सिलिएक डिजिज अर्थात् गहुँबाट हुने एक प्रकारको एलर्जी हो । यस रोगमा गहुँमा पाइने ग्लुटेन प्रोटिन शरीरमा पाचन हुन पाउँदैन । यसले शरीरको सानो आन्द्राको भित्री भागको सतहलाई नष्ट गर्न थाल्छ र माथि उल्लेखित समस्या देखिन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त सम्बन्धित चिकित्सकसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ । यसका तीन प्रकार हुन्छन् :
गहुँबाट हुने एलर्जी
गहुँबाट एलर्जी त्यसवेला हुन्छ, जब शरीरमा पाइने प्रोटिन, एलबुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लिएडिन र ग्लुटिनप्रति इम्युनो ग्लोबुलिन (आइजिई)ले एन्टिबडिजका रूपमा विपरीत प्रतिक्रिया दर्साउँछ । यसबाट हुने एलर्जीका सामान्य देखिने लक्षणहरूमा छालासम्बन्धी रोग आर्टिकेरिया, एग्जिमा, एन्जियोडिमा, पेट दुख्नु, पेट बटार्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, मुखमा घाउ हुनु, आस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, कब्जियत या पखाला लाग्नु, पेटमा अत्यधिक ग्यास बन्नु, टाउको दुख्नु, अत्यधिक कमजोरी महसुस हुनु, हड्डी तथा जोर्नीमा दुखाइ हुनु, हात या खुट्टाको औँला झमझमाउनु, बेचैनी, डिप्रेसन, स्किन रेसेज, नङमा सेतो दाग देखिनु, घाँटी पोल्नु, शरीरको तौल घट्नु, हल्का चोटपटक लागेमा पनि हड्डी भाँचिनु आदि हुन् ।
सिलिएक डिजिज शरीरको इम्युनो सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को आनुवंशिक रोग हो । गहुँमा पाइने ग्लुटेन प्रोटिन तत्वलाई नै यसको मुख्य कारण मानिन्छ । यसले खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्दछ । भोजनका माध्यमले जब ग्लुटेन शरीरभित्र पुग्छ, अनि यसले सानो आन्द्राको म्युकोको विलाइलाई नै नष्ट गर्न सुरु गरिदिन्छ । सानो आन्द्राको विलाइले नै भोजनको पोषक तत्वलाई अवशोषित गरी त्यसलाई रगतका माध्यमले शरीरमा पठाउने काम गर्दछ । भोजनमा भिटामिन, क्याल्सियम, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याटस तथा अन्य पोषक तत्वहरू हुन्छन् । यसरी सानो आन्द्राको विलाइ नष्ट हुन थालेपछि यसले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैन । जसको फलस्वरूप यसबाट प्रभावित व्यक्ति बिस्तारै दुब्लाउँदै जान्छ र कुपोषणको सिकार हुन्छ ।
हामीले खाएको खाना पचाउन शरीरले एक प्रकारको पाचन रस (एन्जाइम) को निर्माण गर्छ । शरीरमा एन्जाइमको निर्माण भएन भने गहुँको पाचन हुन पाउँदैन । फलस्वरूप शरीरमा ह्विट इनटलरेन्स अर्थात् एलर्जी देखिन थाल्छ ।
गहुँबाट हुने एलर्जीको कारण यही हो भन्न गाह्रो छ । किनभने, हालसम्म यस रोगको कारण यही हो भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन । चिकित्सा विशेषज्ञहरू अहिले पनि यस रोगको कारणको खोजीमा लागिरहेका छन् । तर, पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । छिमेकी राष्ट्र भारतको राजस्थानमा सन् २०१६ तिर गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार यस रोगबाट करिब साढे तीन लाख व्यक्ति प्रभावित छन् ।
सेलिएक डिजिज र आइजिडी एन्टिबडिज ग्लुटेन तत्वको प्रतिक्रियाको परिणाम हो । केटाकेटीमा राम्रोसँग जाँच गरियो भने यो रोग छिट्टै पत्ता लाग्छ । तर, वयस्कहरूमा यो रोग थाहा पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ । किनभने, उनीहरूमा यसको लक्षण त्यति सिभियर हुँदैन, जति बालबालिकामा देखिन्छ ।
एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिमा यस रोगको कुनै उपचार छैन । किनभने, यो रोग कुनै ब्याक्टेरिया वा भाइरसबाट लाग्दैन । यो रोग गहुँजस्तो खाद्यपदार्थबाट हुन्छ । यसकारण यस रोगबाट प्रभावित व्यक्तिले जीवनभरि नै गहुँ, जौजस्ता खाद्यपदार्थ, जसमा ग्लुटेन हुन्छ, सधैँका लागि खान बन्द गर्नुपर्छ ।
यस्तो रोग भएकाले भात, चिउरा, मकै, बाजरा, मुरइ, फापर, आरारोट, साबुदाना, आलु, दूध तथा दूधबाट बनेका परिकार, घिउ, मख्खन, रसबरी, बर्फी आदि खानुपर्छ । तजा माछा, मासु, अन्डा, पपकर्न, फलफूल, हरियो सागपात, कफी, मह, चनाको बेसनबाट बनेका परिकार खान सकिन्छ ।
गहुँ, पिठो, मैदा, पुरी, जिलेबी, सुजी, सेबई, जौबाट बनेका परिकार समोसा, ब्रेड, डुनोट, दलिया, आइसक्रिम, माल्टेड दूध, कास्टर्ड पाउडर, बिस्कुट, प्रोटिन पाउडर तथा पेयपदार्थमा बियर खानुहुँदैन।
#के हो सिलिएक डिजिज ?